Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Kedu ihe na-ekpo ọkụ ugbu a na uwe anya maka 2022
Na-adọta mmụọ nsọ site na akụkọ 2022 Trends ya na akwa anya na-ere nke ọma, onye na-ere ahịa n'ịntanetị DTC na-ebu amụma ụdị uwe anya kacha mma nke afọ.
EyeBuyDirect ebula amụma ihe nlere anya ise kachasị elu nke ndị na-azụ ahịa ga-ahụ na ụlọ ọrụ nku anya afọ a. N'ịlele okpokolo agba ndị na-ere ahịa na ịbanye na akụkọ 2022 Trends ha ewepụtara na mbụ, a na-atụ anya na ndị na-azụ ahịa ga-agbasi mbọ ike na usoro ise akọwapụtara n'afọ a:
• Nnọpụiche ewegharịrị: Ndị na-anọpụ iche na-abụkarị ihe a na-aga ma a bịa n'ihe gbasara akwa anya. Isi ọcha na oji na-apụ apụ, na pigmenti dị nro bụ nnọpụiche ọhụrụ maka 2022, na-ekwe ka anya gị na-ebuli uwe gị elu. Ma ọ bụ ube oyibo, mmanụ oliv, ma ọ bụ mmanụ aṅụ na-acha odo odo, na-atụ anya ịhụ uwe anya ndị ọzọ na-egosipụta ụda dị nro na mgbakwunye na nke doro anya, translucent okpokolo agba na palettes agba ndị a na-ewu ewu n'afọ a.
• Mpempe akwụkwọ ndị siri ike, nke kacha elu: Kpọọ ha asị ma ọ bụ hụ ha n'anya, a na-edobe enyo anya cat-anya ka ọ bụrụ onye na-ere ahịa n'elu maka 2022. Ndị a retro frames na-abịa n'ụdị dị iche iche na agba na ụdị (ụfọdụ ndị nwere obi ike karịa ndị ọzọ). Ụdị nku anya a na-agbakwụnye nkọ na ihu yana mmetụ ọkaibe nye uwe ndị ahụ na-adịghị ahụkebe ndị na-azụ ahịa na-ama jijiji site n'ọfịs ụlọ ha.
• Ihe ochie dị ọhụrụ ọzọ (vintage): Ọ bụ ezie na ugogbe anya anya pusi nwere ike ịdị na-ewu ewu na ụmụ nwanyị, anyị ga-ahụ nha nha nha nke ndị na-eri nri nwoke na-agụsi ike n'ebe uwe anya nke vintage dị n'afọ a. Ndị na-anya ụgbọ elu na ndị na-eme njem bụ usoro abụọ kachasị elu anyị na-atụ anya ya, ma na lensị ndenye ọgwụ na ugogbe anya maka anwụ. Okpokoro osisi vine na-egosipụta nkọwa hinge ma ọ bụ ndụmọdụ ndebiri mbe na-eweta enweghị oge na-emeju uwe ọ bụla - yana nke anyị ga-ahụ ka ndị ahịa na-ahọrọ.
• Egwuregwu: Egwuregwu na-ezute ụdị mmadụ na usoro 2022 a, ka ndị na-azụ ahịa na-eji akwa anya ha na-akwali ókèala 'egwuregwu' ọdịnala, anyị ga-ahụ ọdịnihu enyo mkpuchi egwuregwu mkpuchi na-ewu ewu. gradients dị nro na lenses polarized na-ebuga ndị na-azụ ahịa n'ụlọ ikpe pickleball n'okporo ụzọ, ebe ha na-agbakwunye akwa nchekwa dị mkpa.
• Ugogbe anya anwụ na-agụ: Ndị na-agụ akwụkwọ na-enwe oge ha, yana ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-agbapụ maka otu ụzọ enyo dị mma na ejiji na-enye nkwado ọzọ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ na-agagharị na akụkọ akụkọ kwa ụbọchị. Ka ụbọchị na-adị ogologo ma okpomọkụ na-abawanye, ndị na-azụ ahịa ga-achọ ụzọ abụọ nke ndị na-agụ akwụkwọ ga-apụ n'èzí, ya mere anyị ga-ahụ ịgụ ugogbe anya maka anwụ na-amalite na-emekarị na ọnwa ndị na-abịa. Ma isi otu tint, mirror-tinted (na-egbochi 10-60% ìhè anyanwụ karịa ọkọlọtọ tinted okpokolo agba) ma ọ bụ ugogbe anya maka anwụ na-agụ gradient, ndị na-azụ ahịa ga-anakọta uwe anya a.